Xuquuqda Iyo Xaqa Waalidka - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Xuquuqda Iyo Xaqa Waalidka
Xuquuqda Iyo Xaqa Waalidka
Xogside – Markii uu aqoon yahanku ka gudbay imtixaankii hore ayaa loo sheegay inuu geli doono waraysi (Interview) si go’aankii ugu danbeeya looga gaadho inuu ku guulaysto jagada maamulaha ee shirkadda ka banaanayd.
Wuxu ahaa aqoonyahan aad u dhisan, gudoomiyaha shirkadda markii uu arkay natiijada imtixaanka uu keenay iyo Cv-ga iyo natooyinka imtixaanadiisa ilaa heer jaamacadeed, ee uu soo gudbiyay aad ayuu ula yaabay heerka aqoontiisa. Markii uu la kulmay wuxu weydiiyay su’aalahan:
Miyay jirtaa deeqo waxbarasho oo aad wax ku baratay? , wuxu ku jawaabay Maya. Marka kale wuxu weydiiyay Ma aabaha ayaa ka bixin jirin kharashka waxbarasho. Waxa uu ku jawaabay aabahay wuxu dhintay anagoo hal sano jiray. Hooyaday ayaa bixin jirtay. Gudoomiyaha: Hooyada maxay qabataa ? Aqoonyahanka: Hooyaday dharka ayay dadka u maydhaa. Gudoomiyha: Adigu Miyaad la maydhaa? Aqoonyahan: Maya, ma ogola waxay igu tidhaa adigu casharadaada ka akhriso.
Gudoomiyaha: Caawa iyada gacmaheeda u maydh ka dibna subax beri ah ii kaalay. Aqoonyahankii ayaa habeenkii hooyadii u maydhay gacamaheeda waxase uu ogaaday in gacamaheedu ay noqdeen kuwo adkaaday oo dhib weyni ka muuqato. Habeenkii ayuu ka maydhay dharkii intii hadhsanayd isagoo ogaaday dhibtaada hooyadii haysatay.
Subixii ayuu u galay guddomiyaha isagoo weli dareemaya hooyadii. arinkii ayuu u sheegay iyo sida uu isu bedelay markii uu ogaaday gacmaheeda isbedelka ku dhacay. Gudoomiyaha ayaa ku yidhi : Haddana waanu ku qaadanay shaqadii Maamulaha adigoo kuugu dheemayay inaad ku heshay dadaalkii hooyadaaa ku gelisay.
Previous articleWaayaha Murugada Ardayga
Next articleAfar Bilood ka dib waxa la ogaaday in carruur ku khaldantay rugtii ay ku dhasheen